Andro Iraisampirenena Ho An’ny Mpitsindroka: Ho An’ny Fanodinana Indray Ao Amerika Latina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Marsa 2016 2:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, 日本語, Español
Mpitsindroka iray ao amin'ny tobim-pako iray ao Bogota, Kolombia, iray amin'ireo firenena ao amin'ny faritra isan'ny efa lasa lavitra amin'ny fanaovana lalàna sy fanomezana lanja ny mpitsindroka. Sary Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo. Fampiasàna nahazoana alàlana.
Angamba tsy fantatrareo, nefa tsy aiza fa ao Amerika Latina ao, sy ao Karaiba, dia mamelona olona eo amin'ny 4 tapitrisa eo ny asan'ireo mpitsindroka, araka ny tarehimarika avy amin'ny Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo (IRR) – Fandraisana andraikitry ny faritra ho amin'ny fanodinana ifandrimbonana. Manangona, mifantina ary mitsindroka sy mivarotra ireo fako mety avy any an-tranontsika, na ireo toerampivarotana na indostria na fanariampako, ireny lehilahy sy vehivavy ireny. Manana ny 1 Martsa ho andro iraisampirenena natao ho azy io asa mafy nefa manana ny lanjany io ; andro iray ikatsahan'ireo mpitsindroka ny mba hanomezana lanja ny anjara andraikitra raisin'izy ireo sy hametrahana, any amin'ireo firenena ao amin'ny faritra, politika ho an'ny fifandrimbonana amin'ny fitantanana ny fako sy fiarovana ireo mpisehatra fototra amin'izy io.
Betsaka ny tombony ateraky ny fisian'ireo mpitsindroka, misy fiantraikany miabo amin'ny toekarena eo an-toerana mihitsy izany, ny famoronana asa sy ny fampihenana ireo fandanian'ny tanàna amin'ny resaka fitantanana ny fako. Manao asa sarobidy ihany koa ireo mpitsindroka, amin'ny fandraisany anjara amin'ny fikoloana ny tontolo iainana sy ny fahasalaman'ny daholobe :
Shiliana mpitsindroka, mandray anjara aminà atrikasa iray ho fanamafisana, ny fahaizamitarika ary ho fampivoarana ny olona. Sary IRR, fampiasàna nahazoana alàlana
Na izany aza, na eo aza io fankalazàna vaovao ny Andro iraisampirenena ho an'ny mpitsindroka io, misy foana ireo olana marobe tavela.
Any amin'ny zanatohatra farany ambany amin'ny indostrian'ny fanodinana, amin'ny fanangonana sy fifantenana ny fako hatrany amin'ny fiaviany, ireo mpitsindroka amin'izao fotoana izao no mpamatsy voalohany amin'ny resaka akora fototra avy nojifaina. Araka ny tarehimariky ny IRR, 50 hatramin'ny 90% amin'ireo zavatra ampiasaina any amin'ny indostria no avy any amin'ireo mpitsindroka izay tsy mandray afa-tsy 5% amin'ny tombony aterak'izany anefa, ao anatin'ity tsimbalivalin'ny toekarena izay misy azy ireo ity.
io tarehimarika manaitra io dia azo hazavaina amin'ny fahavitsian'ireo mpitsindroka mandray anjara amin'ny politikan'ny fitantanana ny fako, ny lalàna tsy mahavita mijery ny asan'izy ireo sy ny toetra maha-tsy ara-dalàna ny asan-dry zareo. Toejavatra iray natolotry ny filohan'ny Tambajotra Nasionalin'ireo Mpitsindroka ao Ekoatora, Laura Guanoluisa :
Mamerina amintsika ny loza iray nahatsiravina manasongadina ny fahosàn'ireo izay mivelona amin'io asa io ny fankalazàna ny Andro Iraisampirenea ho an'ny Mpitsindroka. Ny 1 Martsa 1992, tao amin'ny anjerimanontolo iray ao Kolombia, 11 ireo mpitsindroka maty nisy namono mba hahafahana maka sy mivarotra ny taovan'izy ireo.
Amin'izao fotoana izao, tafiditra ho ao anatin'ny tambajotra Red Lacre ireo mpitsindroka ao amin'ny tanibe ary nahatontosa dingana maro ho firosoana tato anatin'ireo taompolo faramparany teo, mba hanomezana lanja ny asan'izy ireo sy ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny toekarena ary ny fampandrosoana maharitra ny fireneny tsirairay avy. Ao anatin'ity lahatsary ity, misy ireo mpikambana ao anatin'ilay tambajotra, avy amin'ny toerana samihafa ao amin'ny faritra, manolotra hevitra vitsivitsy sy fitakiana mety hitondra ho amin'ny firotsahana/fanolorantena matanjaka kokoa :
Ankoatry ny fitolomana hahazo fiarovana sy ny fampidirana ireny mpiasa ireny ho anaty sehatry ny ara-dalàna, ezahan'ireo fikambanan'ny mpitsindroka ny hampiroborobo ny famoronana tontolo manome vàhana ny fitantànana manontolo ny fako ‘mafy/bolongana’. Etsy andaniny, namorona vovonana ry zareo iarahany amin'ireo sehatra hafa, na avy amin'ny fanjakàna izany na ny tsy miankina, satria raha tsy misy io fitambarana io, sarotra kokoa ho azy ny hanatratra ny tanjony.
Ao Shily, noho ny fisian'ireo vovonana eo amin'ny samy mpitsindroka, ireo mpitarika ao an-toerana ary ny sehatra tsy miankina, asa atao izao ny fametrahana lasitra ho an'ny fanodinana ifandrimbonan'ny rehetra any aminà kaominina 4 ao an-drenivohitra. Sary IRR fampiasàna nahazoana alàlana.
Ny iray tamin'ireny dia ny Fandraisana Andraikitry ny Faritra hisian'ny Fanodinana Ifandrimbonana izay mikatsaka ny hitaona ny adihevitra hijery ny politikam-panjakana momba ny fanodinana ny fako any amin'ireo firenena 16 ao amin'ny faritra. Noho ireo tetikasan'ny tanàna sy ireo tetikasam-pirenena, hatramin'ny 2011 ity vondrona ity no miasa amin'ny fampiofanana sy fanaovana izay hampanara-dalàna ireo mpitsindroka, hatramin'ny famoronana fitaovana ho fampandraisana anjara ny rehetra, izay niteraka tombony mivantana ho an'ireo mpitsindroka miisa 17.000 ao amin'ny tanibe.
Ireo fikambanana tafiditra amin'ireny tolona ireny dia mandray ny fanodinana indray ho toy ny tsena iray mafy sy ifandrimbonana, izay ahafahan'ireo mpitsindroka sy ireo mpisehatra sosialy rehetra manday anjara amin'ny alàlan'ny dingana iray izay mety hisy fiantraikany, tsy hoe fotsiny amin'ny resaka toekarena fa koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fahasalamàn'ny daholobe.